Tonizia: Bilaogera Palestiniana Nosakanana Tsy Hiditra Amin’ny Fihaonamben’ny Bilaogera · Global Voices teny Malagasy
Tonizia: Bilaogera Palestiniana Nosakanana Tsy Hiditra Amin'ny Fihaonamben'ny Bilaogera
Voadika ny 05 Oktobra 2011 17:53 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, عربي, Ελληνικά, English
Nolavin'ny manampahefana Toniziana ny hanome fahazoan-dàlana (visa) ho an'ireo bilaogera Toniziana hanatrika ny Fihaonambe Fahatelon'ireo Bilaogera Arabo atao ao Tunis ny 3 hatramin'ny 6 Oktobra 2011.
Zava-mahasarika ho an'ireo bilaogera sy mafàna fo Arabo ilay fihaonana, no sady fotoana iray ho azy ireo hifampizaràna fomba fijery sy hianarana avy amin'ny tsirairay. Iarahana mikarakara amin'ny Global Voices, Nawaat sy Heinrich Böll Foundation ilay hetsika ary atrehanà bilaogera efa ho zato avy amin'ireo firenena Arabo rehetra manodidina.
Ny fanapahan-kevitra hanakana ireo bilaogera Palestiniana tsy hanatrika ilay hetsika dia kanonta ho an'ireo bilaogera Arabo, ary tsy nisy na iray aza nanampo fihetsika toy izany avy aminà firenena iray, izay nandrehitra ny antsoina hoe Lohataona Arabo, ary nitondra tamin'ny fitakiana fahalalahana nanerana ny faritra.
Ny 2 Oktobra, i Saleh Dawabsheh, bilaogera Palestiniana, izay monina ao Ramallah dia nibitsika [ar] hoe:
Noho ny antony tsy fantatra, ny Minisitry ny Atitany Toniziana dia mandà ny hanomezana visa hidiran'ireo bilaogera Palestiniana ho any Tonizia hanatrika ny Fihaonamben'ireo Bilaogera Arabo.
Ny Alatsinainy 3 Oktobra, andro nanombohan'ny Fihaonamben'ireo Bilaogera Arabo, mbola niezaka indray mandeha indray nangataka visa ireo bilaogera Palestiniana, saingy mbola voasakana indray mandeha indray tsy hiditra ao Tonizia.
Ny 3 Oktobra, i Saleh Dawabsheh dia nibitsika [ar] hoe:
Ireo bilaogera Palestiniana voasakana tsy hiditra ao Tonizia dia hanao fanentanana iray hiresaka ny zava-mitranga, ary hiampanga ity fanalàm-baraka sy fanavakavahana ara-poko.
Nanapa-kevitra ny hanao an-kivy an'ilay fihaonambe ilay bilaogera Toniziana @tounsiahourra mba ho fanehoana firaisankina amin'ireo bilaogera Palestiniana.
Hoy izy nibitsika tamin'ny 2 Oktobra [ar]:
Ho firaisankina amin'ireo bilaogera Palestiniana nolavina tsy hiditra eto Tonizia, ambarako fa tsy handray anjara amin'ity Fihaonambe Fahatelon'ireo Bilaogera Arabo ity aho.
Manampy izy ao anatinà bitsika [ar] iray hafa :
Mahatsikaiky ny fitondrana eto Tonizia. Manohana ny ezaky ny Palestiniana ho firenena iray ry zareo ary etsy andaniny mandà ny fidiran'ireo bilaogera Palestiniana miady amin'ny fibodoana ny taniny.
Sary avy aminà mafàna fo Palestiniana @almagdela nozaraina avy amin'ny Twitpic
#AB11 mijoro amin'ny firaisankina
Ireo bilaogera sy mafàna fo mandray anjara amin'ilay fihaonambe dia tsy nanadino ireo Palestiniana namany.
Nandritra ny andro faharoan'ilay fihaonambe, ilay Siriana mafàna fo sady bilaogera Razan Ghazzawi (@RedRazan) dia nivezivezy teny amin'ny manodidina sady nibaby sora-baventy nivaky hoe:” OK, nolavina tsy hiditra ny Pals. Ndao tsy ny hibitsika fotsiny momba izany no hataontsika”.
Hisham Almiraat, bilaogera Maraokana dia mibitsika hoe:
Io maraina io dia maro ireo fandinihana anaty tao amin'ny Fihaonamben'ireo Bilaogera Arabo ao Tunis (#ab11) hatramin'ny nahafantarana fa nolavina tsy nomena visa ireo namantsika Palestiniana.
Fanambaràna iray manameloka ny hetsika nataon'ny Masoivoho Toniziana ao Ramallah sy mangataka fanazavàna no navoakan'ireo mpikarakara ny AB11.
Ny Heinrich Boell Foundation, Global Voices Online sy ny Nawaat Association dia manameloka mafy ilay fanapahan-kevitry ny Masoivoho Toniziana ao Ramallah handà tsy hanome visa ireo bilaogera Palestiniana sy mpanao gazety saika hanatrika ilay Fihaonambe Fahatelon'ny Bilaogera Arabo hatao ny 3 haramin'ny 6 Oktobra 2011. […] Izahay dia mangataka fanazavàna avy amin'ny Ministeran'ny Atitany Toniziana ary mitady fanazavana ny amin'ny antony nandàvana ireo mpandray anjara Palestiniana.
Resaka tamin'ny Skype niarahana tamin'ireo bilaogera Arabo voasakana tsy hiditra handray anjara amin'ilay Fihaonambe Fahatelon'reo Bilaogera Arabo. Sary avy amin'ny @georgiap tao amin'ny picplz.com.
Ny Talata tolakandro, ireo mpikarakara sy ny mpandray anjara amin'ilay Fihaonambe Fahatelon'ireo Bilaogera Arabo dia nanomana resaka tamin'ny Skype niarahana tamin'ireo blaogera Palestiniana voasakana tsy hahazo miditra ao Tonizia.
@RedRazan: Resaka amin'ny Skype amin'izao fotoana iarahana amin'ireo bilaogera Palestiniana izay nolavin'ny masoivoho Toniziana ao Ramallah sy Caire ny hanome visa azy.
Maneho hevitra ireo bilaogera Palestiniana
Nanoratra tao amin'ny bilaoginy mikasika ny zava-nitranga ireo bilaogera Palestiniana mba ho fampahafantarana an'izao tontolo izao. Abir Kopty nizara lahatsoratra iray tao amin'ny bilaoginy, mitondra lohateny hoe “Ompa iray hoan'ny Lohataona Arabo: bilaogera Palestiniana tsy omena visa”. Hoy izy: :
Manontany tena aho: moa va tsy manana zava-niainana azo ifampizaràna sy zo hahafantatra koa ny Palestiniana? Isan'ireo ao anatin'ny tontolo Arabo koa ve ny Palestiniana sa tsia? Tsy efa leon'ny fanjakazakana Israeliana sy ny fameperana ny fivezivezeny ve ry zareo ka dia ampiana ny fameperana apetrak'ireo fitondrana Arabo indray?
[…] Ny antony naroson'ny Ministeran'ny Atitany Toniziana ho nandàvana ny fanomezana visa an'ireo bilaogera Palestiniana dia hoe ny Fikambanana ‘Nawaat’ no nandefa ny fanasàna azy ireo, ary ilay fihaonambe dia tsy nahazo alàlana rahateo. Ka dia manontany tena isika hoe fomba ahoana no nahatongavan'ireo Arabo hafa rehetra mpandray anjara nahazo visa aminà hetsika tsy nahazoana alàlana?
Ho ahy, ny Lohataona Arabo dia tsy hoe fotsiny fiovàna mpitondra; fa koa fiovàn'ny fomba fanaon'ny fitondràna, izay niasa mafy tokoa hampizarazara antsika, satria loza mananontanona ho an'ny fahamarinan-toeran'izy ireo ny firaisankina sy ny fitambaran'ny Arabo. Ary koa fanànana hery ho entina miady amin'ny tsy rariny rehetra.
Rasha, bilaogera Palestiniana iray izay heverina ho tokony handray anjara amin'ilay fihaonambe, dia manoratra hoe [ar]:
Ato an-tranoko aty Acca aho manaraka ny hetsiky ny Fihaonambe Fahatelon'ireo Bilaogera Arabo ao Tunis, amin'ny alàlan'ny Twitter. Efa mahazatra izany, saingy tamin'ity indray mitoraka ity, ary tsy tahaka ireo teo aloha, dia heverina ho isan'ny mpandray anjara amin'ilay izy aho, miaraka amin'ireo namako Arabo.
Natomboka ny fanentanana
Fanentanana iray any anaty aterineto ” hangatahana fanazavàna iray avy amin'ny Ministeran'ny Atitany Toniziana” no natomboka. Noforonina ny Pejy Facebook iray atao hoe Nolavin'ny Ministeran'ny Atitany Toniziana ny VISA ho an'ireo bilaogera Palestiniana, ary hetsika iray atao hoe Fanangonan-tsonia: Nahoana ireo bilaogera Palestiniana no tsy navela hiditra ao Tonizia. Tao amin'ny Twitter, ny tenifototra #Visarejected dia ampiasaina matetika mihitsy hanelezana ny feo mikasika izay nitranga.
Raha hamaky misimisy kokoa
Storify: Fihaonamben'ireo bilaogera Arabo: Palestiniana nosakanana tsy hiditra ao Tunis [en]